GỤỌ NKE Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Brazilian Sign Language Cambodian Cebuano Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Ecuadorian Sign Language English Estonian Finnish French German Greek Haitian Creole Hungarian Igbo Indonesian Isoko Italian Japanese Kikamba Kikuyu Kirundi Kongo Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Maya Myanmar Nepali Norwegian Okpe Oromo Papiamento (Curaçao) Persian Peruvian Sign Language Polish Portuguese Portuguese (European) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Ukrainian Urdu Vietnamese Wolaita
“Mgbe iwe na-ewe m, m na-achọ onye m ga-akọrọ otú obi dị m. Mgbe obi na-adịghị mụ mma, m na-achọ onye ga-akasi m obi. Mgbe obi dị m ụtọ, m na-achọ onye ga-eso m ṅụrịa. A sị m kwuo, inwe ndị enyi dị ezigbo mkpa.”—Brittany.
ỤFỌDỤ ndị na-ekwu na ụmụaka chọrọ ndị ha na ha ga na-egwuri egwu, ma ndị na-eto eto chọrọ ndị enyi. Gịnị dị iche n’enyi na onye ya na mmadụ na-egwuri egwu?
Onye gị na ya na-egwuri egwu bụ onye gị na ya na-anọ.
Enyi gị bụ onye ihe na-amasị gị na-amasị ya.
Baịbụl kwukwara na “ezi enyi nwere ịhụnanya mgbe niile, ọ bụkwa nwanne a mụrụ maka oge nsogbu.” (Ilu 17:17) Enyi e kwuru okwu ya n’ebe a nwere ike ọ bụghị ụdị enyi nwatakịrị na-emeta n’ebe ha na-egwuri egwu!
Eziokwu: Ka ị na-etokwu, i kwesịrị inwe ndị enyi
1. Nwere àgwà ọma
2. Na-ebi ndụ otú Chineke chọrọ
3. Ndị ị ga-amụta àgwà ọma n’aka ha
Ajụjụ: Olee otú ị ga-esi nweta ụdị ndị enyi ahụ? Ka anyị tụlee ha otu otu.
Ihe Mbụ E Ji Ama Ezigbo Enyi​—Àgwà Ọma
Ihe i kwesịrị ịma. Ọ bụghị onye ọ bụla kwuru na ya bụ enyi gị ga-abụ ezigbo enyi. Baịbụl kwudịrị na “e nwere ndị enyi na-achọkarị ịkụrisị ibe ha.” (Ilu 18:24) I nwere ike iche na o siri ike ịhụ enyi ga-eme ụdị ihe a. Ma chegodị echiche: Ò nwetụla onye sịrị na ya bụ enyi gị ma ya aghọọ gị aghụghọ? Ò nwetụla nke kwuru gị okwu azụ ma ọ bụ jiri gị gbaa asịrị? Ụdị ihe ahụ nwere ike ime ka ị ghara ịtụkwasị onye ọ bụla sịrị na ya bụ enyi gị obi. * Ma cheta na ihe ka mkpa abụghị inwe ọtụtụ ndị enyi, kama ọ bụ inwe ezigbo ndị enyi!
Ihe i nwere ike ime. Ka ndị ị na-emeta enyi bụrụ ndị ị ga-amụta àgwà ọma n’aka ha.
“Onye ọ bụla na-ekwu na enyi m bụ́ Fiona bụ ezigbo mmadụ. Achọkwara m ka ndị mmadụ na-ekwu na m bụ ezigbo mmadụ. Achọrọ m ịdị ka ya. Àgwà ọma ya na-atọ m ụtọ.”—Yvette, dị afọ iri na asaa.
Megodị ihe a.
1. Gụọ Ndị Galeshia 5:22, 23.
2. Jụọ onwe gị, sị, ‘Ndị enyi m hà na-akpa àgwà ndị so ná “mkpụrụ nke mmụọ nsọ”?’
3. Dee aha ndị kacha bụrụ ezigbo enyi gị n’okpuru ebe a. I dee aha onye nke ọ bụla, gị edee àgwà e ji mara ya.
Ihe Nwere Ike Inyere Gị Aka: Ọ bụrụ naanị àgwà ọjọọ onye ahụ ka ị na-echeta, mara na o nwere ike ịbụ na i kwesịrị imeta ndị enyi ka mma!
Ihe nke Abụọ E Ji Ama Ezigbo Enyi​—Ibi Ndụ Otú Chineke Chọrọ
Ihe i kwesịrị ịma. Ọ bụrụ na ọ dị gị ọkụ n’ahụ́ inweta ndị enyi, o nwere ike ime ka nke ọ bụla ị hụrụ dị gị mma, a sịgodị na ọ bụghị ezigbo mmadụ. Baịbụl kwuru, sị: “Ihe agaghị agaziri onye ya na ndị nzuzu na-emekọ ihe.” (Ilu 13:20) “Ndị nzuzu” e kwuru okwu ha ebe a abụghị ndị na-ada n’ule ma ọ bụ ndị na-amaghị ihe, kama ọ bụ ndị na-anaghị achọ iji ntị anụ ndụmọdụ bara uru. Ha na-akpakwa àgwà ọjọọ. Ọ bụ ụdị ndị enyi ahụ ka ị na-ekwesịghị inwe!
Ihe i nwere ike ime. Kama imeta onye ọ bụla ị hụrụ enyi, na-ahọ ndị ga-abụ enyi gị ahọ. (Abụ Ọma 26:4) Ọ pụtaghị na ị ga-akpọ ndị mmadụ asị. Ịhọ ndị ga-abụ ndị enyi gị ahọ pụtara na anya ruru gị ala ịmata “ihe dị iche n’etiti onye ezi omume na onye ajọ omume, n’etiti onye na-ejere Chineke ozi na onye na-adịghị ejere ya ozi.”—Malakaị 3:18.
“Obi dị m ụtọ na ndị mụrụ m nyeere m aka inweta ndị enyi na-ebi ndụ otú Chineke chọrọ, ndị mụ na ha bụ ọgbọ.”—Christopher, dị afọ iri na atọ.
Zaa ajụjụ ndị a:
Mụ na ndị enyi m nọrọ, ụjọ ọ̀ na-atụ m na ha nwere ike ime ka m mee ihe m ma na ọ dịghị mma?
Ọ̀ na-esiri m ike igosi ndị mụrụ m ndị bụ́ ndị enyi m n’ihi na ụjọ na-atụ m na ha nwere ike ikwu na ha abụghị ezigbo ndị enyi?
Ihe Nwere Ike Inyere Gị Aka: Ọ bụrụ na ị zara ee n’ajụjụ abụọ ahụ, chọọ ndị na-erubere Chineke isi ị ga-emeta enyi, ya bụ, ndị na-akpa àgwà ọma e ji mara Ndị Kraịst.
Ihe nke Atọ E Ji Ama Ezigbo Enyi​—Ime Ka Ị Mụta Àgwà Ọma
Ihe i kwesịrị ịma. Baịbụl kwuru, sị: “Mkpakọrịta ọjọọ na-emebi àgwà ọma.” (1 Ndị Kọrịnt 15:33) Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Lauren sịrị: “Naanị mgbe ụmụ akwụkwọ ibe m na-ekwe ka mụ na ha na-akpa bụ ma m mee ihe ha gwara m. N’ihi ya, enweghị m enyi ná mmalite. Ma m mechara kpebie ịkpawa àgwà ka ha, ka mụ na ha bụrụ enyi.” Lauren chọpụtara na ọ bụrụ na mmadụ na-eme ihe ọ bụla ndị ọzọ chọrọ ka o mee, onye ahụ ga-adị ka okwe ha ji eti epele, nke ha na-ewere tinye n’ebe ọ bụla sọrọ ha. E kwesịghị ime gị otú ahụ!
Ihe i nwere ike ime. Ọ bụrụ na ndị gị na ha na-akpa na-esi ọnwụ na ị ga-agbanwe àgwà gị ma mewe ka ha, gị na ha kwụsị ịkpa. I mee otú ahụ, o nwere ike ndị enyi gị agaghịzi adị ọtụtụ; ma obi ga-adịkwu gị ụtọ. Ọ ga-emekwa ka i nwetakwuo ezigbo ndị enyi, ya bụ, ụdị ndị enyi ga-eme ka ị mụta àgwà ọma.—Ndị Rom 12:2.
“Ezigbo enyi m bụ́ Clint bụ nwa okorobịa isi jụrụ oyi na onye na-aghọta otú obi dị ndị ọzọ. Ọ na-agbakwa m ezigbo ume.”—Jason, dị afọ iri abụọ na otu.
M̀ na-agbanwe ụdị uwe m na-eyi, otú m si ekwu okwu, ma ọ bụ otú m si akpa àgwà iji mee ka obi dị ndị enyi m mma?
M̀ na-aga ebe a na-akpa àgwà ọjọọ, bụ́ ebe m na-agaghị achọ ịga ma e wezụga na ndị enyi m na-aga ebe ahụ?
Ihe Nwere Ike Inyere Gị Aka: Ọ bụrụ na ị zara ee n’ajụjụ abụọ ndị ahụ, gakwuru ndị mụrụ gị ma ọ bụ onye ọzọ toro eto ka ha gwa gị ihe ị ga-eme. Ọ bụrụ na ị bụ Onyeàmà Jehova, i nwere ike ịgakwuru okenye ọgbakọ ma gwa ya ka o nyere gị aka imeta ndị enyi ga-eme ka ị mụta àgwà ọma.
GỤKWUO BANYERE ISIOKWU A N’ISI NKE 9 NA NWANNE AKWỤKWỌ A BỤ́ NKE 2
Onye sịrị na ya bụ enyi gị ọ̀ na-enye gị nsogbu ka i mee ihe ọjọọ? Obi gị ọ̀ chọrọ ịrafu gị ka i mee ihe ọjọọ? Chọpụta otú ị ga-esi merie ọnwụnwa ahụ!
^ par. 14 N’eziokwu, ọ dịghị onye na-adịghị emehie. (Ndị Rom 3:23) N’ihi ya, ọ bụrụ na enyi gị emee ihe wutere gị ma mechaa rịọ gị mgbaghara, cheta na “ịhụnanya na-ekpuchi ọtụtụ mmehie.”—1 Pita 4:8.
Na-ebi ndụ otú Chineke chọrọ. O nwere ike ime ka ndị na-agbalị ibi ndụ otú ahụ chọọ ka gị na ha bụrụ enyi. Ha ga-abụ ụdị ndị enyi kacha mma i nwere!
Chineke adịghị ele mmadụ anya n’ihu, ma ọ na-ahọ ndị ‘ga-abụ ọbịa n’ụlọikwuu ya’ ahọ.—Abụ Ọma 15:1-5.
Ihe m ga-eme ka m nweta ezigbo ndị enyi bụ ․․․․․
Ụfọdụ ndị tọrọ m m chọrọ ịmata nke ọma bụ ․․․․․
● Olee àgwà ndị kacha amasị gị ị chọrọ ka enyi gị nwee, n’ihi gịnịkwa?
● Olee àgwà ndị i kwesịrị inwe iji bụrụ ezigbo enyi?
[Ihe odide gbatụrụ okpotokpo dị na peeji nke 60]
“Mgbe ndị mụrụ m gwara m ka mụ na ụfọdụ ndị enyi m kwụsị ịna-akpa, obi m gwara m na ọ bụ naanị ha ka m chọrọ ka mụ na ha na-akpa. Ma ihe ahụ ndị mụrụ m gwara m bụ ezigbo ndụmọdụ. Mgbe anya mepere m, achọpụtara m na ezigbo ndị enyi juru eju.”—Cole
[Igbe dị na peeji nke 61]
Megodị Ihe Ndị A
Jụọ ndị mụrụ gị ihe ụfọdụ banyere imeta ndị enyi. Jụọ ha ụdị ndị enyi ha nwere mgbe ha hà ka gị. Hà na-akwa mmakwaara ma ha cheta ụdị ndị ha metara enyi n’oge ahụ? Ọ bụrụ na ha na-akwa mmakwaara, ọ̀ bụ maka gịnị? Jụọ ha otú ị ga-esi zere ụfọdụ n’ime nsogbu ndị ha nwere.
Mee ka ndị mụrụ gị mata ndị enyi gị. Ọ bụrụ na ọ na-esiri gị ike ime otú ahụ, jụọ onwe gị, sị, ‘Gịnị mere o ji esiri m ike?’ È nwere ihe ndị enyi gị na-eme ị maara na ndị mụrụ gị ga-asị na ọ dịghị mma? Ọ bụrụ na e nwere, mara na i kwesịrị ilezikwu anya n’ụdị ndị ị na-emeta enyi.
Na-ege ntị nke ọma. Gosi na ihe banyere ndị enyi gị na-emetụ gị n’obi nakwa na ị chọrọ ka ihe dịrị ha mma.—Ndị Filipaị 2:4.
Na-agbaghara. Atụla anya na ha ga na-emetacha ihe niile. “Anyị niile na-asụ ngọngọ ọtụtụ ugboro.”—Jems 3:2.
Hapụtụ ndị enyi gị aka. Echela na gị na ha ga na-anọ mgbe niile. Ezigbo ndị enyi gị ga-anọ ya mgbe ọ bụla ị chọrọ ha.—Ekliziastis 4:9, 10.
[Foto dị na peeji nke 63]
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla ndị ọzọ chọrọ ka i mee, ka gị na ha dịrị ná mma, ị ga-adị ka okwe ha ji eti epele, nke ha na-ewere tinye n’ebe ọ bụla sọrọ ha
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Olee Otú M Ga-esi Emeta Ezigbo Ndị Enyi?
yp1 isi 8 p. 57-63